Ben Arfa oo lagu wado in daba yaaqada usbuucan ku biiro….. – Gool FM
Ben Arfa oo lagu wado in daba yaaqada usbuucan ku biiro…..
Byare June 28, 2016
(France) 28 Juunyo 2016. Xiddigii hore ee Premier League ee iminka ka ciyaara horyaalka Faransiiska Hatem Ben Afra ayaa lagu wadaa inuu daba yaaqada usbuucan ku soo biiro kooxda Sevilla sida ay fahansan tahay warsida Goal.com.
29-jirka kaa oo heshiiskiisu dhammaaday kaddib markii uu ka soo tagay Nice xagaagan ayaa heshiis saddex sano ah la gaaray kooxda ka ciyaarta La Lig iyadoona lagu wado in lagula wareego 10-milyan oo bound.
PSG ayay u badnayd inay bar-dhammaadkiisu noqon doonto balse kooxda xafidaneysa horyaalka Faransiiska ayaan dalab ka gudbin wiilkan ka shidnaa horyaalka sanadkii la soo dhaafay.
Xiddiga reer France ayaan wax boos ah ka helin xulkiisa Faransiiska ee qeyb ka ah Euro 2016 iyadoo ay jirto wacdarihii uu ka dhigay kooxda Nice kal ciyaareedkii la soo dhaafay oo ku dhammeystay kaalinta afaraad ee Ligue 1 isagoo dhaliyay 17 gool isla markaana caawiyay Lix gool.
Sikastaba, laacibkii hore ee Newcastle United ayaa la midoobi doona tababare Jorge Sampaoli, oo isagu loo magacaabay isniintii xilka tababaranimo ee naadiga Sevilla.